Kheyraadka Bixiyaha - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Adeegga Macaamiisha: 1-800-440-1561
Qorshaha Caafimaadka Apple
Caafimaadka Apple CHPW
Dhammaan Qorshayaasha U-qalmitaanka
U-qalmitaanka Caafimaadka Apple
U-qalmitaanka Faa'iidada Medicare
CHNW Cascade Xullo U Qalmid
Da'da 19 jirka
Qorshayaasha Medicare Advantage Plans
Faa'iidooyinka + Guudmarka
Muraayadaha indhaha oo lacag la’aan ah
Barnaamijka Abaalmarinta Uurka
Barnaamijka Abaalmarinta Dhalashada kadib
Barnaamijka Abaalmarinta Cunugga
Adiga oo Caafimaad qaba, Ilmo Caafimaad qaba
Naadiga Wiilasha & Gabdhaha
Nolol madaxbanaan ee dhalinyarada
Qiimo Dhimista Amazon
Raacitaan Bilaash ah
Xarunta Xubinta ee CHPW
Daabac kaarka aqoonsiga, deji dookhyada isgaadhsiinta, hel dukumeenti qorshe, beddel bixiyaha daryeelka aasaasiga ah, iyo in ka badan.
Soo gal ➔
Xariirka Xubinta ee myCHPW
Arag faahfaahinta daboolka, heerka gudbinta, dir/hel fariimaha sugan, iyo in ka badan.
Maareynta Kiiska Bariatric
Xuquuqda Xubinta iyo Asturnaanta
Foomamka Xubnaha & Qalabka
Qorshahaaga iyo Daboolidaada
Xarunta Caafimaadka Habdhaqanka
Su'aalaha Caafimaadka Habdhaqanka
Daryeelka Hooyo Cusub
Bulshooyinka Dhaladka ah
Dhallinyarada iyo Dhallinyarada
Dhallinyartii Kala Guurka
Muhaajiriinta iyo Qaxootiga
U Gudbi Saaxiib
U-Qalmitaanka & Macaashka Xubinta
Caafimaadka Habdhaqanka PA
Qalliinka Bariatric PA
Shuruudaha Caymiska Caafimaadka
Foomamka Bixiyaha & Qalabka
Xarunta Tababbarka Bixiyaha
Tababarka HCA iyo CMS
Biilasha Bixiyaha iyo Sheegashooyinka
Tababbarka Xariirka Bixiyaha
Tababbarka Tababbarka Caafimaadka iyo Kheyraadka
Adeegyada Caafimaadka Xubinta
Barnaamijka Dib u Eegista Bukaanka iyo Isuduwaha
Ku soo biir shabkadayada
Qolka Saxaafadda ee CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Bixiyaha > Khayraadka Bixiyaha
Tixraac tilmaamahayaga daryeelka iyo macluumaadka kale ee bixiyeyaasha.
Foomamka iyo Qalabka
Maktabada Macluumaadka Caafimaadka
WAAN QIIMAYNAA ra'yi celintaada!
Faallooyinkaagu waxay naga caawinayaan inaan kor u qaadno tayada barnaamijyadayada iyo adeegyadayada. Fadlan qaado daqiiqado yar si aad u buuxiso sahan kooban.
Raadi ilo iyo foomam aad u baahan tahay si aad u daryeesho xubnaheenna. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan buuxinta iyo soo gudbinta foomamka khadka tooska ah ama foomka ah, fadlan la xiriir Adeegga macaamiisha caawimaad.
Shabakadaha Macaashka Xubinta
Shabakadaha Macaashka Xubinta waxay u shaqeeyaan sidii tilmaan tixraac mana ahan dammaanad qaadka caymiska. Haddii adeeg ama daaweyn aan lagu qorin shabakadda dheefaha xubinta, tixraac midka ku habboon oggolaansho hore qaybta macluumaad dheeraad ah.
2022 Gargaarka Gargaarka
CHPW Daryeelka Maareynta Caafimaadka Apple
Adeegga Caafimaadka Habdhaqanka Kaliya
2021 Gargaarka GargaarkaXir 2021 Faa'iidooyinka Shabakadda
Ka baadh Formulary Apple Health
Eeg foomamka Faa'iidada Medicare
Foomka Codsiga Go'aaminta Go'aaminta Ka-Reebidda Foomka
Warbixinta Dib U Xusuusashada Daroogada
FARSAMADA FARSAMADA BIXINTA
EEDAYNTA BIILKA IYO QARASHKA CADAWAYNTA
Go'aaminta caymiska farmasiga, fadlan wac 1-800-417-8164.
Waxaad soo gudbin kartaa codsi ku saabsan dib-u-eegista go'aaminta caymiska adoo soo diraya foomka Codsiga Go'aaminta Caymiska ama buuxinta foomka internetka.
Soo Degso Foomka Codsiga Go'aaminta Caymiska
Online Ku buuxi Codsigaaga Go'aaminta Caymiska khadka tooska ah
Apple Health (Medicaid) waxay u baahan tahay oggolaansho bukaan-jiif si loo ogaado ogaanshaha ilkaha. Bixiyeyaasha waxay ku dari karaan nambarka oggolaanshaha sheegashada ama waxay soo diri karaan nuqul ogolaanshaha codsigooda.
Ruqsadaha looma baahna kharashyada xarunta ee la xiriira adeegyada guud ee caadiga ah, ee ilkaha:
Xubnaha da'doodu tahay siddeed (8) sano jir iyo ka yar markay tahay taariikhda adeegga.
Xubnaha lagu aqoonsaday ProviderOne oo leh Maamulka Naafada Koritaanka
Qalliinadan kala-jeexan ee khafiifka ah / xeerarka CPT ee lagu sameeyay bukaan-jiifka, bukaan-socodka, ama Xarunta Adeegga Ambalaaska (ASC): 42200, 42205, 42210, 42215, 42225, 42226,42227, 42235, 42260, 42280, iyo 42281 oo leh cilad-sheegid jeex jeexan
Tixraac bogga Habka Lookup Code Nidaamka iyo Liiska Oggolaanshaha Hore si aad u hesho macluumaad dhameystiran.
Helitaanka Ilkaha iyo Ilkaha Ilkaha (ABCD)
Barnaamijka Helitaanka Ilmaha & Ilkaha Ilkaha (ABCD) waxaa loogu talagalay macaamiisha u-qalma Apple Health ee jira 5 sano iyo ka yar. Bixiyeyaasha shahaadada leh ee ABCD ee aan ilkaha ahayn waa inay biil kubixiyaan Waxbarashada Qoyska ee Caafimaadka Qoyska (FOHE), codsi ku saabsan maadada loo yaqaan 'fluoride', iyo qiimeyn afka ah oo xilliyeed leh oo leh xeerarka CPT ee soo socda iyo wax ka beddelayayaasha:
99188 oo leh wax beddelaha DA: Codsiga Maaddada Fluoride-ka la mariyo
99499 oo leh wax ka beddelka DA: Adeegga E&M oo aan qorneyn - in loo isticmaalo Qiimeynta Afka ee Waqtiga
99429 oo leh wax ka beddelka DA: Adeegga ka-hortagga liistada-oo loo isticmaalo ABCD FOHE ee PCP
Tilmaamaha Tababarka Caafimaadka ee Xaaladaha Caafimaad ee Xad-dhaafka ah iyo Adeegyada Ka-hortagga
Shabakadda Caafimaadka Bulshada ee Washington iyo Qorshaha Caafimaadka Beesha ee Washington waxay isticmaalaan tilmaamaha cudurrada daba-dheeraada (ay ku jiraan xaaladaha caafimaadka iyo dabeecadda) iyo adeegyada ka hortagga, sida hoos ku taxan. Tixraaca waxaa lagu sameeyay caddaynta ku saleysan, tilmaamaha la isku faca ah ee ka yimid hay'adaha Qaranku aqoonsan yahay. Tilmaamaha waxaa loogu talagalay in lagu hago bixiyeyaasha daryeelka xubnahooda oo ay ku jiraan CHNW Cascade Select, CHPW Medicare, CHPW Apple Health Care Managed Care, iyo CHPW Adeegyada Caafimaadka Habdhaqanka ee xubnaha. Nidaamyadu waxay sidoo kale hubiyaan in shuruudaha loo isticmaalo go'aamada maaraynta ka faa'iidaysigu ay yihiin kuwo hadda jira.
Dhammaan tilmaamaha waxaa dib loo eegaa ugu yaraan hal mar labadii sanoba mar. Guddiga Hormarinta Tayada Caafimaadka (CQIC), oo ay ku jiraan bixiyeyaasha caafimaadka iyo caafimaadka hab dhaqanka iyo khabiiro tayo leh, ayaa kaqeybqaata dib u eegistaan ​​oo ansixiya wixii isbedel ah. Nuqulada waraaqaha ah ee tilmaamaha ayaa loo heli karaa xubnaha ama bixiyeyaasha markay codsadaan, iyo sidoo kale xiriiriyeyaasha la bixiyay.
Soo dejiso Tilmaamaha Hab-dhaqanka Kiliinikada ee hadda jira
Maareynta ka-faa'iideysiga ayaa ah geedi socod dib-u-eegis ah in daryeelku caafimaad ahaan muhiim u yahay oo ku habboon yahay bukaannada. Nidaamkeenna waxaa ka mid ah adeegsiga oggolaansho hore, dib u eegis isku mid ah, iyo dib u eegista adeegga kadib si loo hubiyo habboonaanta, baahida caafimaad, iyo waxtarka adeegyada daryeelka caafimaadka, habraacyada, iyo goobta adeegga ku habboon.
Yuu sameeyaa faallooyinka?
Dib-u-eegista waxaa sameeya shaqaalaha shatiga leh ee habboon, oo ay ku jiraan - laakiin aan ku xaddidnayn - kalkaaliyayaasha caafimaadka, agaasimaha caafimaadka, iyo farmashiistaha. Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee shaqaalaha Washington ayaa diyaar u ah inay ka wada hadlaan wixii ku saabsan habka maaraynta isticmaalka, oggolaanshaha, ama diidmada.
Dib-u-eegista Oggolaanshaha Hore waa habka dib-u-eegista adeegyada caafimaadka, qalliinka, iyo caafimaadka dabeecadda qaarkood. Tani waa in la hubiyo baahida caafimaad iyo ku habboonaanta daryeelka la buuxiyo ka hor intaan adeegyada la keenin.
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee shaqaalaha iyo bixiyeyaasha Washington ayaa go'aamiya in adeegyada la oggolaaday ama la diiday. Waxaan u isticmaalnaa macluumaadka dhakhtarkaaga si tan loo sameeyo. Waxaan sidoo kale eegeynaa heerarka caafimaadka. Go’aamadayagu waa cadaalad oo loo siman yahay Waxaan raacnaa xeerarkan:
Go'aamiyeyaasha Maareynta Ka-faa'iideystayaasha ayaa go'aamiya ama diida iyadoo ku saleysan oo keliya in daryeelka iyo adeegga ay habboon yihiin iyo haddii daryeelka ama adeegga la daboolayo.
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington kuma abaalmariyo bixiyeyaasha ama kuwa kale diidmada caymiska ama daryeelka.
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington ma bixiyo dhiirigelin maaliyadeed si loogu dhiirrigeliyo kuwa go'aaminta Maareynta Ka-faa'iideysiga ah inay gaaraan go'aanno ka dhasha adeegsiga daryeelka ama adeegsiga.
Sidaan u Qiimeyno Teknolojiyada Cusub
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington waxaa ka go'an inuu la socdo teknoolojiyada cusub. Tani waxay ka dhigan tahay inaan dib u eegeyno baaritaanno cusub, daroogo, daaweyn, iyo aalado iyo qaabab cusub oo loo adeegsado baaritaannada hadda, daroogada, daaweynta, iyo aaladaha.
Tiknoolajiyada cusub waxaa lagu qiimeeyaa si joogto ah. Waxaa loo ansixiyay iyadoo lagu saleynayo heerarka ilaaliya badbaadada bukaanka.
Waxaan ula tacaalnaa codsiyada tikniyoolajiyadda cusub xubin gaar ah waqtigeeda. Waxaa loogu shaqeeyaa sidii codsi oggolaansho hore ah. Dhammaan codsiyada waxay ku xiran yihiin faa'iidooyinka hadda jira iyo xaddidaadaha caymiska. Xubnaha loo diiday adeeg ama tixraac waxay xaq u leeyihiin inay soo gudbiyaan rafcaan.
Si aad wax badan uga ogaato nidaamka go'aan qaadashada ama haddii tiknoolajiyad cusub oo gaar ah ay daboosho Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington, fadlan wac kooxdayada Adeegga Macaamiisha 1-800-440-1561 (TTY Relay: Garaac 711), Isniinta ilaa Jimcaha, 8:00 subaxnimo ilaa 5:00 galabnimo
Marka laga reebo go'aannada CHPW ee la xiriira qiimeynta DRG, Jadwalka Khidmadaha, iyo mas'uuliyadda dhaqaale ee xubinta, adeeg bixiyuhu wuxuu rafcaan ka qaadan karaa go'aanka CHPW ee ay rumeysan yihiin inuu khalad yahay. Rafcaan bixiyaha aan kaqeyb qaadan waa inuu ahaadaa mid qoraal ah laguna soo gudbiyaa sagaashan (90) maalmood gudahood laga bilaabo taariikhda ogeysiiska diidmada; ama bixinta bilowga ah ee sheegashada nadiifka ah ee xubnaha Apple Health; ama lixdan (60) maalmood gudahood xubnaha Medicare.
Qeyb racfaan bixiyaha waa inuu ahaadaa mid qoraal ah laguna soo gudbiyaa afar iyo labaatan (24) bilood gudahood laga bilaabo taariikhda ogeysiiska diidmada ama bixinta bilowga dalab nadiif ah. Codsiyada racfaanka heerka labaad waa la eegi doonaa hadii macluumaad cusub la siiyo CHPW lixdan (60) maalmood gudahood laga soo bilaabo go'aanka heerka koowaad.
Racfaanku waa inuu kujiraa:
Magaca xubinta iyo lambarka Aqoonsiga xubin
Lambarka sheegashada (haddii ay khuseyso)
Dhammaan dukumiintiyada taageeraya waxay ku xiran yihiin sababta diidmada
Sababta codsashada rafcaanka
Oggolaansho saxeexan (haddii u xaraysanayo magaca xubin)
Si aad uhesho xaashida daboolida racfaanka ee CHPW waxaad aadaa Foomamka iyo Qalabka bogga.
Bixiyeyaashu waxay u gudbin karaan rafcaan:
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington
Feejignaan: Waaxda Rafcaanka
1111 Wadada Saddexaad, Suite 400
Fax: (206) 613-8984
Waxaad ka heli kartaa macluumaadka guud iyo wararka ku saabsan u hoggaansanaanta gudaha Warsidaha U Hogaansanaanta CHPW, oo loo daabaco saddexdii biloodba mar si ay kheyraad ugu noqoto bixiyayaashayada.
Si aad wax badan uga ogaato barnaamijka u hogaansanaanta CHPW, fadlan eeg Buugga Bixiyaha CHPW.
Siyaasadaha iyo Habsocodyada
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington wuxuu sameeyaa siyaasado iyo nidaamyo gaar ah oo ay heli karaan bixiyeyaasha. Haddii aad u baahan tahay nuqullo adag oo ka mid ah agabkeenna, la xiriir Wakiilka Xiriirka Bixiyaha. Siyaasadaha hadda jira ee aad u baahan tahay inaad daryeesho xubnaha waxaad ka heli kartaa bogga internetka Xeerarka iyo Nidaamyada bogga.
8: 00 AMA 5: 00 pm
Isniinta ilaa Jimcaha
Daabac Kaarka Xubinta
Qorshe & Daboolis
Kheyraadka Caafimaadka Habdhaqanka
Dual Uqalma (SNP)
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Diseembar 30, 2021
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) waxa la aasaasay 1992kii xarumaha caafimaadka beesha ee Washington. CHPW waxaa ka go'an caafimaadka Washington. Si aad isaga diiwaan geliso Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington Medicaid ama Qorshaha Faa'iidada Medicare, waa inaad u qalantaa oo aad ku nooshahay Medicare (Adams, Benton, Chelan, Clallam, Clark, Cowlitz, Douglas, Franklin, Grant, Gray's Harbor, Jefferson, King, Kitsap, Lewis, Mason, Okanogan, Pacific, Pierce, Skagit, Snohomish, Spokane, Stevens, Thurston, Wahkiakum, Walla Walla, Whatcom, iyo degmooyinka Yakima ee Gobolka Washington) ama Medicaid (dhammaan degmooyinka Gobolka Washington) aagga adeega. Tani maaha sharraxaad dhammaystiran oo faa'iido leh. Fadlan nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah.
Xuquuqda daabacaadda © 2022 Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington